खुसीको खबर ! अब पाँच महिनामा १३ हजारलाई निःशुल्क सीप – Samabeshi Khabar
खुसीको खबर ! अब पाँच महिनामा १३ हजारलाई निःशुल्क सीप
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:३३ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेका लागि खुसीको खबर आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले अबको पाँच महिनामा कम्तीमा १३ हजारलाई विभिन्न ट्रेडमा निःशुल्क सीप सिकाउँदैछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक यति ठूलो संख्यालाई निःशुल्क सीप सिकाउन थालिएको हो।
परियोजनाकी टिम लिडर सीता घिमिरेले ३० दिने तालिमको दौरानमा विदेशमा गर्ने काम मात्र नभई गन्तव्य मुलुकबारे तीन दिनसम्म जानकारी पनि दिने गरिएको बताइन्। उनले यो वर्ष एक हजार विदेश जान खोजेका युवालाई र दुई हजार ६ सय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई निःशुल्क सीप सिकाउने कार्यक्रम रहेको बताइन्।
विगतदेखि नै सीप सिकाउनु पर्ने आवाज उठ्दै आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले त्यस्तो अवसर पाउन सकेका थिएनन्। जुनसुकै पेसा र कामका लागि सीप नभई नहुने भए पनि अहिलेसम्म सीपलाई जोड नदिँदा वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ।
बोर्डका अनुसार बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाख युवामध्ये २५ प्रतिशत मात्र दक्षरअर्धदक्ष हुने गरेका छन्। करिब ७५ प्रतिशत युवा कुनै पनि सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर गन्तव्य मुलुकमा जाने संख्याको तुलनामा रेमिटेन्स भित्रिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
सीप नसिकेकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको तुलनामा भित्रिने रेमिटेन्स न्यून रहेको विज्ञ बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। वैदेशिक रोजगारीको मृत्युको कारणमा कतिपयले प्राविधिक सीप र शिक्षाको कमीलाई पनि बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय युवाले एसी, हिटर जस्ता उपकरण चलाउन नजान्दा अनाहकमा ज्यान जाने गरेको पाइन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवामध्ये सात सय ५३ को निधन भएको थियो। विज्ञहरू सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवायुवतीले अहिलेको भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने र जसले गर्दा मुलुक र स्वयं व्यक्तिको आर्थिक जीवन स्तरमा सुधार हुने बताउँछन्।